Wafdi uu hogaaminayo wasiirka Arrimaha gudaha Hirshabeelle oo gaaray Baladweyne | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wafdi uu hogaaminayo wasiirka Arrimaha gudaha Hirshabeelle oo gaaray Baladweyne
Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan waxaa Maanta gaaray Wafdi uu hogaaminayo wasiirka Arrimaha gudaha Hirshabeelle oo ka kooban Golaha Wasiirada dowlad Goboleedka HirShabeelle, kuwaas oo ku kala sugnaa Magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho.
Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Magaalada Beledweyne ayaa Wasiiradan ah waxaa kusoo dhaweeyay Xubno ka tirsan labada Golle ee Maamulka HirShabeelle, kuwaas oo horay u joogay Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Wafdigan Wasiirada HirShabeelle ayaa Magaalada Beledweyne u tagay si ay ugu qeyb galaan shirka Golaha Wasiirada HirShabeelle beri, kaas oo looga hadlayo arrimo dhowr ah.
Madaxweyne kuxigeenka HirShabeelle Yuusuf Axmed Hagar ( Dabageed) ayaa Xubnaha Golaha Wasiirada Xarunta Gobolka kulan gaar ah kula qaatay, waxaana Magaalada Beledweyne laga dareemayaa u diyaar garoowga Shirka Golaha Wasiirada oo todobaadkaan looga hadlayo xaalada dalka iyo arrimaha doorashooyinka.
Wafdi uu hogaaminayo wasiirka Arrimaha gudaha Hirshabeelle oo gaaray Baladweyne was last modified: July 3rd, 2021 by Admin
Golaha Ammaanka oo ka digey colaad hor leh oo ka dhacda Gobolka Tigray
Ciidamadii ugu dambeeyay ee Maraykanka oo ka baxay saldhigga Bagram ee Afghanistan
SAWIRO:-Dowladda oo Qalab iyo Dawooyin ku wareejisay Maamulka Koonfur Galbeed
Akhriso:-Al-Shabaab oo xubin Sare ka tirsanaa ku dilay degmada Jilib